Kungekudala, uKire Knightley uye waguqulwa waba ngabalinganiswa bexesha lethu-ukuthatha ubuncinane iifilimu "iiPirates of the Caribbean", "iDuchess", "Uthando olunqatshelwe" okanye "Ukuhlawulelwa". Kwaye ngoku umdlali we-actress ubhalisele inxaxheba ekumambathweni kwiingubo zanamhlanje, kungekhona kwimpahla ye-museum.
Olu thulo luza kuba "ngobusuku bokugqibela" ("ubusuku bokugqibela"), apho kunye neKira ziza kuba iinkwenkwezi ezifana no-Eva Mendez, uSam Worthington kunye noGuillaume Canet. Ibali liza kuxhalabisa isibini esitshatileyo-emva kokuba umyeni ehamba nohambo kunye nomnye umfazi, othandayo.
Ngethuba ehleli emgceni kwaye unquma ukuba uyayibonakalisa inyaniso okanye uyishiye yonke into esemva kwesiqalo, umfazi udibana nothando lwakhe lwangaphambili kwaye - ngelixa ikati lingekho, iigundane ziyamnandi.
Akukacaci ukuba ngubani oza kudlala kulo mgca wothando, kodwa ukusuka kwinqanaba le-oKino.ua, isibini esitshatileyo esiza kutshata siza kuphuma ku Knightley kunye neCanne kwisiqulatho seskrini, kwaye uMendes noWorthington baza kuvela kwinxaxheba yeentlola, ithuba lokuqala lokudlala kule filimu, apho kungekho zixhobo, abafokazi, ama-robot okanye ukukratshiza i-Christian Bale. Kwaye mhlawumbi yonke into iya kuphambuka kwaye iya kuhluke ngokupheleleyo - ixesha liya kuthetha.
Ngokuqinisekileyo kuyaziwa ngokude ukuba omnye-kumlawuli wegama elibizayo uMassey Tudyedin oku kuza kuba yikhenkethi yokuqala eyadutshulwa kwiskripthi sakhe esibhaliweyo. Ukubhala kwakhe italente kuya kuba ngenxa yokubonakala komfanekiso "NgoLwesithathu", uJan Carlos Fresnadillo acwangcisa ukususa.
Ukusebenza kwifilimu kunye noKeira Knightley kuza kuqala ngenyanga ezayo eNew York. Inkxaso-mali eyomeleleyo inikezwa nguGaumont.
Ngqo. Ukuhamba ngohlobo lwe-Alexei Yagudin
Udokotela uRobert Pattinson: I-Biography
Iintsika zeendali zeenkwenkwezi ze-movie
Biography ka-Elsa Schiaparelli
I-Medlar - ummangaliso wevithamini
Ukutya kukutya ngobuncinane